Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. खेतीयोग्य जमिन मासेर घर – Emountain TV
खेतीयोग्य जमिन मासेर घर
रामेछाप,१ फागुन । मन्थली नगरपालिकाको निर्णय अटेर गर्दै स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन् । मन्थलीको फाँटमा धान खेत मासेर घर बनाउने अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । दिनहुँ नयाँ घर थपिएका थपियै छन् ।
नगरपालिकाले घर बनाउनेलाई निरुत्साहित त गर्न सकेको छैन । आफैंले नक्सा पास गरिदिएर त्यस्तो कामलाई अघोषित रूपमा ‘वैधता’ दिन थालेको छ ।
नगरपालिकाले वर्ष दिनअघि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर नक्सा स्वीकृत भने गरिरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम भएकाले हरेक वर्ष बजार विस्तार भइरहेको छ । अबल र दोयम जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने सरकारी नीतिलाई सम्बन्धित निकायले लत्याएका कारण पनि खेत मासिंदै गएको छ । कित्ता मिलानको नाममा नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खण्डीकरण गरिएका लिखत पारित हुँदै आएका छन् ।
निर्वाचित भएपछि खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने आश्वासन दिएका नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भूमिसम्बन्धी नीति बनाई त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने बताए । ‘नीति बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि रोक्न नसकिने होइन, त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।’
केही वर्षअघिसम्म आकाशे, गडुवारी, खाँदबारी, फोस्रे, बोधने, सानीमदौं र कुमालटारलगायत फाँटमा अत्यधिक मात्रामा अन्न उत्पादन हुन्थ्यो । सबैजसो फाँटमा रणजोरको पानीले सिँचाइ हुन्थ्यो । अहिले पानी लाग्ने कुला मासिएका छन् । नापीमा सिँचाइ कुलो जनाइएको नक्सासमेत मेटेर फाइल नक्सा बनाउँदै जग्गा किनबेच हुने क्रम बढेको छ । नापी कार्यालयबाट साबिकको नक्सा मेटेर नयाँ निकाल्ने गरिएकाले कुलो चलाएर खेती गर्छु भन्ने किसानले पनि प्रमाण पाउन सकिरहेका छैनन् ।
आकाशेदेखि पूर्वी सानीमदौंसम्म खेतको बीच–बीचमा घर बनिरहेका छन् ।
खेत मासेर बनाइएका घरसम्म पुग्न उपयुक्त मापदण्डको बाटोसमेत व्यवस्था छैन । मन्थलीको साबिक २ नम्बर वडामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । सोसाइटीले हालसम्म सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पुननिर्माण कार्यक्रमका प्रमुख जयराम बस्नेतले बताए । ‘बाटोका कारण नक्सा पास नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘नक्सा पास नभएकालाई घर बनाउने अनुमति हुँदैन र किस्ता दिन मिल्दैन । सरकारले भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकामा अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्ने नीति लिएको छ ।
एमाले सचिव आनन्द श्रेष्ठ विपद्का दृष्टिले सानो बाटो भएको क्षेत्रमानक्सा पास गर्दा नै ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले खेतीयोग्य जमिन धेरै घडेरीमा गएकाले हाल समस्याथपिंदै गएको बताए । घर बनाउन रोक्नेभन्दा पनि नगरपालिकाले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कहाँ–कहाँ बस्ती विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र खेतीयोग्य जमिन व्यवस्था गर्नेत्यसको टुंगो लगाएर प्लानिङ हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
लालपूर्जा भएर पनि घरबार बिहीन
महाकाली नगरपालिका क्षेत्रका बाढी प्रभावित घर फर्किन थाले
सिक्टा सिँचाई आयोजनामा अख्तियारको छानबिन
मापदण्ड अनुसार काम गर्न इन्जिनियरलाई धम्की
नेपालगन्जमा २ सय ३५ प्रहरी अलपत्र
चार बर्ष अघिका बाढीपीडितको अवस्था अझै दयनीय
खानेपानिको मुहानमा दिसामा पाइने जिवाणु
सरकारबाट कुनै राहत नपाएको बाढीपिडितको गुनासो
नुवाकोटको लामाटारमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना
खुर्पा प्रहार गरी भाइ र छोराको हत्या
बझाङको जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध